Uvavanyo lwe-torque yentloko -Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Uvavanyo lwentloko ye-torque yovavanyo enye ebizwa ngokuba ngumsebenzi wentloko ye-shear isetyenziselwa ukuvavanya ukubanakho kwe-shear head nut okanye iibholiti ukubamba imithwalo yoomatshini efunekayo.
-OEM i-aluminium enxulumene ne-CNC, iimveliso zobhedu kunye nobhedu
Kubalulekile ukuba uluhlu lokunyamezelana lweemodeli ze-N * m zeemveliso, phantsi kobushushu obushushu.
Ukulinganisa ukuba ixabiso le-torque liya kubonakala njani ekusebenzeni kombane kunye nexesha lokusetyenziswa, sisebenzisa intambo yoqobo esetyenzisiweyo nemveliso evavanyiweyo. Siqhubeka novavanyo lomsebenzi wentloko phantsi kwexabiso elahlukileyo loxinzelelo loomatshini kunye nobushushu ngokwemigangatho yezixhobo zonikezelo zombane.
Umgangatho wovavanyo ngokweCENELEC, EN 50483-4: 2009, NFC 33-020, DL / T 1190-2012 kwaye sisebenzisa ukulandela imigangatho yovavanyo kwiimveliso ezintsha ngaphambi kokumiliselwa, kunye nolawulo lomgangatho wemihla ngemihla, ukuqinisekisa ukuba umthengi wethu unokufumana iimveliso ezihlangabezana neemfuno zomgangatho.